Bindu Matsime, Kushongedza uye Kuzorora | Bezzia
Matsime anga ari munhoroondo yese a chidimbu chakakosha muminda. Chinhu chekushongedza icho chisingangowedzere hunhu kwavari, asi zvakare chinobatsira mukugadzira zvakadzikama uye zvinoratidzira nharaunda nekuda kwekugunun'una kwemvura.
Mumazhizha akaoma akafanana needu, matsime ebindu zvakare chishandiso chekuunza kutsva kunzvimbo ino yekunze. Zvikonzero zvekuda isa tsime mubindu rakonokudaro, akawanda. Zvakawanda sezvinhu zvaunofanira kufunga nezvazvo kusarudza imwe.
1 Zvinhu zvisati zvaitika zvekufunga nezvazvo
2 Mhando dzematsime egadheni
2.1 Naiye manyorerwo / zvinhu
2.2 Nekushanda kwayo
Zvinhu zvisati zvaitika zvekufunga nezvazvo
Iwe haufungirire chero chinhu kana ukatanga kutsvaga matsime egindu usina kumbobvira waongorora kwaunoda kuuisa uye hunhu hwauri kutsvaga mariri. Mikana iri mumusika haina magumo uye kuzvibvunza mibvunzo mishoma usati watanga kuchakurumidza kutsvaga kwako.
Uri kuenda kupi kuiisa? Pakati pebindu kana kumadziro?
Iwe unofarira yakasarudzika tsime rekushanda kana modhi yakagadzirirwa?
Ndeupi mutoo wauri kutsvaga gadheni rako? Yakasarudzika, yemazuva ano, yeMediterranean, minimalist, yakasikwa ...
Ruzha rwechitsime rwakakosha kwauri? Ose ari maviri ekuyerera uye kukwirira kwejeti yemvura zvinokanganisa huwandu hweruzha kubva kunobva.
Unogona kuisanganisa nemvura inoyerera here? Iwe unoda here kuita basa kana iwe unosarudza kushandisa mamwe marudzi enzira dzekushandisa?
Kupindura iyi mibvunzo kuchakubatsira iwe kumisikidza iyo mhando yemhando yakanyanyisa yebindu rako. Nenzira iyi unogona kusefa kutsvagisa kwako uye usvike kumatsime egadheni anokufarira nekukurumidza. Zvino, pakati peicho chaicho mukana, zvese dhizaini uye bhajeti ichakubatsira iwe kuita sarudzo yekupedzisira.
Mhando dzematsime egadheni
Kana iwe waedza kupindura mibvunzo, hazvinganetsi iwe kufungidzira kuti pane zvakawanda zvinhu zvatinogona kutarisa kupatsanura matsime egadheni mumhando dzakasiyana. Nekudaro, nhasi isu tichazongotarisa pane maviri, maari isu atinofunga zvakanyanya kukosha: kuita uye zvinhu.
Naiye manyorerwo / zvinhu
Izvo zvinhu kana seti yezvinhu kubva kwazviri tsime remunda rakagadzirwa sarudza maitiro ako. Mazhinji ematsutso echinyakare echinyakare akagadzirwa nematombo, pamwe neaya echimiro cheMediterranean zvakajairika kuve nezvinhu zveceramic.
Matsime ematombo: Matsime ematombo echisikigo akashandiswa munhoroondo yese sechinhu chakatarisana mubindu. Zvidimbu zvakavezwa uye nemifananidzo yekuveza zvakagara zvichitora nzvimbo yepakati peminda inoyevedza. Avo vane mabheseni kana zvidimbu, zvechikamu chavo, vagara vakashongedza madziro edzimba huru dzenyika. Ose ari maviri anoonekwa nemutengo wavo wakakwira.
Matsime ane tiles: Rudzi urwu rwematsime anowanzo gadzirwa nekongiri uye akashongedzwa nematiles. Mutsika dzechiArabhu vanounza maumbirwo akakomberedzwa uye ane mavara ane mavara; Aya ndiwo manyuko atinowanzo kuwana kumaodzanyemba kweSpain. Nekudaro, zvinokwanisika kugadzira mamwe marudzi emafaira kubva kumatiles, mafonti ane aesthetic yazvino uno. Sei? Uchishandisa mitsara yakatwasuka nematiles mumatoni nematema.
Metallic masosi: Nekufamba kwenguva, matsime esimbi anowana hunhu patina iyo inovapa hunhu. Mune simbi iwe unogona kuwana matsime akaumbika ane yakasarudzika aesthetic, asi zvakare mamwe akagadzirwa kubva nyore simbi zvidimbu izvo zvinowana imwe yemazuva ano aesthetic uye inokodzera zvakakwana mune minimalist kana yekumabvazuva-akafuridzirwa mapindu.
Chinhu chakakosha kwazvo chekutarisa ndeye mhando yekushanda kwetsime. Mazhinji acho ane mota dzemagetsi kuti iwe unokwanisa kubatanidza kune grid kana kumhanya kuburikidza nemabhatiri ekunze kana mapaneru ezuva. Ramba uchifunga kuti zvinoenderana nekwaunoda kuisa tsime, kuribatanidza netiweki yemagetsi kungangoda mamwe mabasa uye kukwidza mutengo.
Nemhando ipi yematsime yaungade kushongedza gadheni rako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Decoration » Zvitubu zvebindu, zvekushongedza uye zvekuzorora
Chii chekudya kubvisa PMS